ဖင်လန်နိုင်ငံ၏ ပညာရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ပညာရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ပညာရေး နှင့် သိပ္ပံ ဝန်ကြီးဌာန
ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန
National education budget (၂၀၁၀)
€ ၁၁.၅ဘီလီယံ (၂၁၀၀ € ပျမ်းမျှတစ်ဦးလျင်)
ဖင်လန် နှင့် ဆွီဒင်
၆၀% ac., ၄၅% voc.
၂၅% (of pop.)
ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယအဆင့် ပညာရေးကို တက္ကသိုလ်ကျောင်း နှင့် လက်မှုကျောင်းစနစ် ဟူ၍ ခွဲထားသည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံ၏ ပညာရေးသည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာတွင် ဦးဆောင်စံပြလောက်ရပြီး၊ တန်းတူညီမျှမှုပေါ်တွင် အခြေခံထားသည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ စာသင်ကြေးခ မယူခြင်း၊ အချိန်ပြည့်သင်ကြားသူများအား အစားအသောက် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ရှိသည်။ ဖင်လန်ပညာရေးစနစ်မှာ နိုင်ငံတော်မှ လုံး၀ပြည့်စုံစွာ ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး၊ ကလေးအရွယ် နေ့ထိမ်းကျောင်းများ နှင့် (၆နှစ်အရွယ်များအတွက်)တစ်နှစ်မူကြိုကျောင်း၊ ၉ နှစ်တက်ရောက်ရသည့် မတက်မနေရ ကျောင်း(၇နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အတွက်)၊ အခြေခံ အလယ်တန်းကျောင်း နှင့် လက်မှုကျောင်းများ၊ အထက်တန်းကျောင်းဖြစ်သည့် တက္ကသိုလ် နှင့် ပိုလီတက္ကနစ်ပညာရေး၊ လူကြီးများအတွက် ဘဝရှေ့ရေး နှင့် ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်သည့် ပညာရေးတို့လည်း ပါရှိသည်။ နော်ဒစ်နိုင်ငံများ၏ မဟာဗျူဟာနည်းအရ တန်းတူညီမျှမှုရရှိစေရန်နှင့် အကောင်းဆုံးပညာရေး စနစ်ရှိစေရန် အများပြည်သူမှ ထောက်ပံ့သည့်ငွေများဖြင့်၊ ကျောင်းသားများကို အားလုံးတက်ရောက်နိုင်သည့် ကျောင်းများသို့ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ခြေရာခံစစ်ဆေးခြင်းမျိုးမရှိဘဲ အခြေခံပညာရေး သင်ကြားခွင့်ပြုသည်။ ဗျူဟာနည်းတစ်ခုမှာ ကျောင်းကွန်ယက်တိုးပွားစေရေး၊ ကျောင်းများ လူနေအိမ်များနှင့် နီးနေစေရန် အတက်နိုင်ဆုံး စီစဉ်ပေးသည်။ အကယ်၍ တောလက်ကျေးရွာများတွင် နေထိုင်ကြသည့် ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းများမှာ ဝေးလံနေပါက၊အခမဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို စီစဉ်စေသည်။ ထိရောက်စွာ သင်ကြားပေးမှု နှင့် ကျောင်းခန်းထဲရှိ အထူးကောင်းမွန်သော ပညာရေးပေါ်မူတည်ကာ ရလဒ်ကောင်းမွန်စေရန် ဆောက်ရွင်ခြင်းတို့သည် နော်ဒစ်နိုင်ငံများ၏ သာမန်စနစ်သာဖြစ်သည်။
၉နှစ်ကြာမြင့်သည့် အခြေခံပညာရေးကျောင်း တက်ရောက်ပြီးလျင်၊ အသက်၁၆ နှစ်အရွယ် ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်သည့် ကျောင်းသားများသည် ဒုတိယအဆင့်ပညာရေးအဖြစ် ပညာရေးပိုင်းဖြစ်သည့် (လူကီယို) သို့မဟုတ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်ကြားရာ(အာမာတီကုဉ်လူ)ရွေးချယ်ကြပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ နှစ်အချိန်ကြာမြင့်သည်။ တတိယအဆင့် ပညာရေးကို နှစ်ခုခွဲထားပြီး၊ တက္ကသိုလ် နှင့် ပိုလီတက္ကနစ်(ammattikorkeakoulu) တို့ဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် "University of Applied Sciences" ဟူ၍ ဘာသာပြန်ခေါ်ဝေါလေ့ရှိသည်။ တက္ကသိုလ်များမှ ဒေါက်တာဘွဲ့နှင့် ပါမောက္ခဘွဲ့များကို အပ်နှင်းကြသည်။ ယခင်တွင် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကို တက္ကသိုလ်အောင်မြင်ပြီးသူများသာ တက်ရောက်ခွင့်ရှိခဲ့သော်လည်း၊ ယခုအခါ Bologna process စတင် အသုံးပြုလာခဲ့ချိန်မှစ၍ ပိုလီတက္ကနစ်ဘွဲ့ရသူများသည်လည်း ဆက်လက်၍ သင်ကြားမှုများပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် တက္ကသိုလ်ပေါင်း ၂၀ နှင့် ပိုလီတက္ကနစ်ကျောင်းပေါင်း ၃၀ရှိသည်။
ပညာရေး အစဉ် နှင့် ကုလ၏လူတိုးတက်ဖွဲ့ဖြိုးမှု အစဉ်၂၀၀၈၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် အချက်အလက်များအရ၊ ဖင်လန်သည် ၀.၉၉၃ ဖြင့် ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးနိုင်ငံများတွင်ရှိပြီး၊ ဒိန်းမတ်၊ ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်တို့နှင့်အတူ ပထမနေရာတွင် တည်ရှိသည်။
၁ ပညာရေး ယဉ်ကျေးမှု
၃ ဒုတိယ အဆင့်
၃.၃ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကျောင်း
၄ တတိယ အဆင့်
၅ ကျောင်းတက်ခြင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း
၇ အမှတ်ပေးပုံ စနစ်
ဖင်လန်နိုင်ငံရှိကလေးများသည် အသက်ကြီးလျင် အဖြစ်ချင်ဆုံး အလုပ်မှာ ကျောင်းဆရာဖြစ်သည်။
master ပိုလီတက္ကနစ်(အသစ်) +၂-၃
ပထမဦးဆုံးဘွဲ့ ပိုလီတက္ကနစ် +၃-၄
upper secondary school (အလိုရှိက) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း (အလိုရှိက) 18-19
comprehensive school (မဖြစ်မနေ) ၁၅-၁၆
အခြေခံအဆင့် ပညာရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ယူရို၄.၁ဘီလယံ အသုံးပြုသည်။
တက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်းတက်သူဦးရေမှာ ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် ၁၆၉ ၀၀၀ ရှိသည်။
အခြေခံအဆင့် ပညာရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ယူရို၄.၁ဘီလယံ၊ တက္ကသိုလ် နှင့် သုသေတန ဌာနများအတွက် ယူရို၂.၂ဘီလယံ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများအတွက် ၁.၆ ဘီလယံအသုံးပြုခဲ့သည်။
၂၀၁၀ခုနှစ် ဖင်လန်နိုင်ငံ၏ ပညာရေးအသုံးချငွေ
Pre-primary education 1) 312 2,7
Comprehensive school education4120 35,7
Upper secondary general education 695 6,0
Vocational education 1 614 14,0
Apprenticeship training 177 1,5
Polytechnic education 896 7,8
University education and research 2)2162 18,8
Other education 442 3,8
Administration 242 2,1
Financial aid for students 871 7,6
Total 11 532 100,0
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ "Ari Antikainen & Anne Luukkainen of the Department of Sociology, University of Joensuu, Finland, "Twenty- five Years of Educational Reform Initiatives in Finland".
↑ Human development indices။ Human Development Reports (2008-12-18)။ 2010-02-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tilastokeskus - Yliopistokoulutus 2011
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖင်လန်နိုင်ငံ၏_ပညာရေး&oldid=706339" မှ ရယူရန်